Fantaro ny fomba fanaovana tatoazy tsy misy toaka amin'ny totozy
Ny karazan-tatoat-tatoat aloha dia avy amin'ny natiora. Azonao ampiasaina amin'ny endriny voajanahary tsy misy toaka ny fanaovana tato ho an'ny tato-tenanao manokana. Ity torolàlana momba ny tato an-tsoratra ity dia tsotra ary nampiasaina tamin'ny endrika isan-karazany nandritra ny an'arivony taona. Indraindray izy dia antsoina hoe loko solon'ny hazo, rongony mainty misy tatoazy, na tatoazy misy poety.
Ny karazana tatoatanao voalohany dia nomanina tamin'ny famafazana lavenona avy amin'ny kitay manontolo vita miaraka amin'ny rano.
Ny lavenon'ny hazo dia karbaona madio, izay nahatonga ny mainty hoditra ho tatoazy. Raha ny karbaona no fototry ny tatoazy maoderina, dia tsy hevitra tsara loatra ny hampiasana rano ho toy ny rano mba hampiato ny ranomainty (ny "carrier"). Na dia azo atao aza ny manamboatra tononkira iray homemade amin'ny alàlan'ny fampiasana rano mangatsiaka, dia manery ny bakteria eo amin'ny hoditra ao anaty lafin-javatra lalindalina kokoa ny sigara ao anaty hoditra. Ny fantsom-pahavoazana tsy misy poizina, toy ny vodka, dia safidy tsara kokoa. Vodka dia fifangaroan'ny alikaola ao anaty rano. Ny alika "fotsy" hafa, toy ny fibobohana toaka na tequila, dia hiasa.
Amboary ny ranomainty avy amin'ny:
1 lava mainty karbaona (ohatra, avy amin'ny hazo nirehitra tanteraka)
Vodka vitsy ihany no nahavita namaha olana
Manomàna ny ranomainty amin'ny alim-bary amin'ny vovoka (15 minitra mankany amin'ny ora iray). Raha toa ka manify loatra ilay fitotoana, dia asio pigment maromaro. Raha toa ka matevina loatra ilay fitambaran-kitapom-bidy, dia vodka kely vodka. Tsara kokoa ny manamboatra ranom-boankazo vaovao ho an'ny fampiasana tsirairay, na dia voatahiry ao anaty fitoeran-tany voajanahary lavitra aza ny ranomainty ary miverina indray.
Tsara ny manao saron-tava sy fonon-tanana raha mampihatra tatoazy mba hisorohana ny fielezan'ny mpitsabo. Ny tatoazy dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana tsindrina na tsilo izay natsipy tao anaty ranomainty ary nanindrona tao anaty hoditra.
Fanamarihana momba ny hazo sy ny taratasy
Ny olona sasany dia manao an'io ranomainty io amin'ny alàlan'ny kitay hazo ao anaty vilia matevina. Ny tombony amin'ny fampiasana taratasy dia ny famokarana karbaona tena tsara. Ny tsy fahampiana dia ny karazan-taratasy sasantsasany dia entina miaraka amin'ny zavatra simika izay mety hijanona ao anaty lavenona (ohatra ny metaly mavesatra).
Raha mampiasa hazo ianao dia aoka ho fantatrao fa hahazo valiny hafa ianao, arakaraka ny karazan-kazo hodianao.
Raha fantatrao fa mila andian-tsavoka maromaro ianao mba hamitana tatoazy, dia tsara ny mampiasa ny loharano mitovy amin'ny karbaona isak'izay ary ny mijery ny habetsaky ny lavenona sy ny rano ampiasainao. Ny fandrefesana amim-pitandremana dia hanampy amin'ny fiantohana fa ny ampahany tsirairay dia manana dika mitovy ihany koa, izay midika ho haavon'ny loko.
Na dia afaka manomana ny volonao aza ianao ary manolotra tatoazy amin'ny tenanao na namana iray dia tsy hevitra tsara ho an'ny ankamaroan'ny olona izany. Ny totozy matihanina dia mifanaraka kokoa amin'ny kalitao sy azo antoka hampiasaina, noho izany dia hanome valiny tsaratsara kokoa izy ireo amin'ny tsy fahampian'ny lanjan'ny fihetsiky ny ranomainty . Ankoatra izany, ireo matihanina amin'ny tatoazy dia voaofana amin'ny teknikan'ny aseptika, noho izany dia ho kely dia kely ny fahafahana mahazo aretina na fanasaziana ny saka amin'ny ra raha toa ianao ka mahazo ny tatoazy anokanana mpanakanto iray efa nampiofanina.
Ahoana ny fomba fanaovana ny gnome faux avy amin'ny kristaly
Ny endrik'olon-tsakafo voajanahary
Ahoana no fanaovana Aspirinina - Acetylsalicylic Acid
Maniry Crystals Chloride
Fomba hanamboarana entona entana
Fifidianana tamin'ny taona 1860: Lincoln no lasa filohan'ny Time of Crisis
Hood College ao Maryland Admissions
Ny fomba fiasan'ny MTV momba ny fanavakavaham-bolonkoditra ary vao mainka nampidirina
Inona no atao hoe Logomisia (Word Aversion)?
UC Santa Barbara GPA, SAT sy ACT Data
Ataovy Hot Ice - Heymouth Chemistry
Ahoana no itomaniana ny 200 Fly
Harriet Tubman - Mpitarika mitarika ho amin'ny Fahalalahana
Ady sefon'ny Amerikanina: Jeneraly Jeneraly Ulysses S. Grant
Ny vokatry ny Ady Lehibe I
Fanajana ny fonenana manokana
Mamaritra ny isa lehibe amin'ny dingana lehibe ho an'ny 2014
Ny biography of Mata Sundri (Sundari Kaur), 2 vavy vadin'i Guru Gobind Singh
Romeo sy Julia avy amin'ny tantara mahafinaritra avy any Shakespeare
Lisitry ny sekolim-panjakana maimaim-poana an-tserasera ho an'ny mpianatra ao Carolina Carolina, K-12
Ny fomba hahamety ny fotoana
Ny sakramentan'ny fitanisan-keloka